Shacabka gobolka waqooyi bari oo dhib iyo dheef kala kulmay xe... | Universal Somali TV
Shacabka gobolka waqooyi bari oo dhib iyo dheef kala kulmay xerada qaxootiga Dadaab
Muwaadin u dhashay Kenya oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in uusan danbi u arkin qaab qaxootinimo ah oo uu uga baxay Kenya sanado ka Hor isaga oo wareysi Siinayay Tv-ga Mareykanka ee CNN-ka.
Wuxuu sheegay in isaga iyo qoyskiisa markii hore ay dan ku kaliftay in ay iska dhiibaan xerada Dadab ka hor inta aysan dib u dajin ka helin wadanka Mareykanka oo hada uu ku sugan yahay.
Dhanka kale boqolaal ruux oo galay diiwaan hey,ada qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa shaleyto ka muujiyay go,aanka markii hore ay uga mid noqdeen qaxootiga ku sugan xeryaha Dadab ee ismaamulkan Garissa.
Qaar ka mid ah dadkaan oo u badan arday ayaa hada ku jahawareersan shaqo la,aan ku heysata xerada Dadab maadaama aysan heysan sharciga Kenya tiiyoo ay jirto in ay dhameeyeen waxbarashada dugsiga sare ayna socdaal iyo siyaado waxbarasho ka heli karin jaamacadaha iyo koleejyada ku yaal magaalada Nairobi.
Xildhibaanka degmada Dadab Maxamed Daahiye ayaa ugu baaqay dowlada in ay shacabka ka soo jeeda gobolkan ay ku dhibtoonayaan faraha ka galay diiwaanka qaramada midoobay ayna awoodin in ay ka dhex shaqeystaan gudaha Dalka.
Mr Daahiye ayaa intaa ku daray in dowlada ay si deg deg ah u xaliso arintaan lana siiyo muwaadiniintan sharciga aqoonsiga ee loo yaqaan Kibandhaha.
Kan-xigaDiyaaradaha Turkiga oo duqeyn sababta...
Kan-horeFaahfaahin dheeri ah oo ka soo baxeys...
50,444,152 unique visits